हिट भएको नेवार प्रेमगीत 'गन... :: सबिना श्रेष्ठ :: Setopati
हिट भएको नेवार प्रेमगीत 'गन वने त्यना...' ले के भन्छ?
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, साउन १
'इमर्ज' ब्यान्डका सदस्यहरू बायाँबाट क्रमशः गिटारिस्ट रोहन शाक्य, ड्रमर सवीर तुलाधर, गायक उजन शाक्य र बाँसुरीवादक अमन बज्राचार्य। तस्बिर सौजन्यः उजन शाक्य
लकडाउनले थुप्रै दिन फोनमा गफिएर चित्त बुझाएका प्रेमी–प्रेमिकाको बल्लतल्ल भेट हुन्छ।
महामारीको जोखिम भएकाले उनीहरूको भेट पहिलेजस्तो सामान्य छैन। केटी आउनेबित्तिकै फर्किन हतारिन्छे। केटा भने छुट्टिन चाहँदैन।
धेरै समयपछि भेट भएकी प्रेमिकाको हतार देखेर ऊ व्यथीत हुन्छ। उसलाई माया देखाएर फकाउँछ। उसको हात समात्छ। लकडाउनभरि आफू कसरी उसको यादमा तड्पेको थिएँ भनेर बयान गर्छ, 'तेज हावाको झोँका होस् वा अविरल झरी, तिमी मलाई छाडेर नजाऊ मैचा।'
ऊ अगाडि भन्छ- 'बादल बीचमा तिमीलाई नै खोजिरहेँ, देखे चन्द्रझैं उज्यालो तिम्रो मन। त्यसैले तिमी मेरो नजिक बस न मैचा।'
केटीले अझै हतार गरेपछि ऊ थप्छ- 'भखरै त भेटेजस्तो लाग्छ, कति धेरै कुरा तिमीलाई भन्न बाँकी नै छ। अलि नजिक नजिक आइदेऊ न तिमी मैचा, मायाको कुरा थोरै भनिदेऊ न, तिम्रो काखलाई सिरानी बनाउनुछ।'
यी उजन शाक्यले लकडाउनमा सिर्जना गरेका काल्पनिक पात्र हुन्, जसको प्रेमकथा पछिल्लो समय भाइरल नेपाल भाषाको गीत 'मैचा' मा वर्णन छ। यो गीत उजनले नै गाएका र संयोजन गरेका हुन्।
गीतको बोल यस्तो छ:
'गन वने त्यना
गन वने त्यना
गन वने त्यना रे... मैचा
वने मते आः ला
हथाय् चाये माः ला
गन वने त्यना रे।'
तीन साताअघि सार्वजनिक यो गीत युट्युबमा हालसम्म साढे पाँच लाखचोटि हेरिएको छ। नेपाल भाषा बुझ्नेहरू त छँदै छन्, नेपाल भाषा नबुझ्ने गैरनेवारहरूले पनि यो गीत बारम्बार सुनिरहेका र गुन्गुनाइरहेका छन्।
युट्युबमा यो गीतमा आएका १६ सय कमेन्टमा अधिकांशले सरहना र प्रोत्साहन गरेका छन्। भाषा नबुझ्नेहरूले पनि यसको संगीत र लय अब्बल दर्जाको भन्दै आएका छन्।
'मलाई नेवाः संगीतमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सधैं हुन्थ्यो। केही नयाँ स्वाद ल्याऊँ भनेर सोचिरहँदा यो गीत बनेको हो,' २१ वर्षीय उजनले भने, 'यति धेरै मान्छेले मन पराइदिनुहोला भन्ने सोचेकै थिइनँ। अहिले त सपनाजस्तो लागिरहेको छ।'
उजन स्वर्णिम स्कुल पढेका हुन्। त्यो बेलादेखि नै गीत लेख्थे, गाउँथे। एसएलसीताका उनकै नेतृत्वमा ब्यान्ड बन्यो– इमर्ज। अंग्रेजी शब्द 'इर्मज' ले 'आउँदै गरेको' भन्ने बुझाउँछ।
'त्यो बेला यसै हावा तालमा ब्यान्ड खोलेका थियौं। ब्यान्डको नाम चाहिँ खत्रा राख्नुपर्छ भन्ने थियो। शब्दहरू छान्दै जाँदा यो नाम आएको हो। हाम्रो ब्यान्ड पनि सुरूआती चरणमा रहेकाले इमर्ज राख्यौं,' नयाँ युवा पुस्ताका प्रतिनिधि उजनले आफ्नै शैलीमा सुनाए।
'मैचा' गीत इमर्ज ब्यान्डबाटै सार्वजनिक गरिएको हो। तर, सुरूमा जो-जो आबद्ध थिए, उनीहरू अहिले ब्यान्डमा छैनन्। पुराना सदस्य भनेका उजन मात्र हुन्, जसले नयाँ साथीहरू जोड्दै ब्यान्ड जीवित राखे।
यो ब्यान्डमा अहिले उजनसँगै अमन बज्राचार्य, रोहन शाक्य र सवीर तुलाधर छन्।
उनीहरू कसरी जोडिए त?
लिड गिटारिस्ट रहेका रोहनकहाँ उजन गितार सिक्न जान्थे। ड्रमर सवीर चाहिँ उजनका बाल्यकालदेखिका साथी हुन्। दुवै रोहनसँगै गितार सिक्थे। पछि उजनको झुकाव गितारभन्दा ड्रमतिर बढी भयो।
बाँसुरीवादक अमन अन्तिममा जोडिए। बासुँरी बजाउने मान्छे चाहिरहेका बेला उनले फेसबुकमार्फत् सम्पर्क गरे। सबैलाई उनले बजाएको बासुँरीको धुन मन परेपछि ब्यान्डका सदस्य भए।
म्युजिक भिडिओ र त्यसमा प्रयोग भएको चित्रमा विनिश महर्जन, आयुष श्रेष्ठ र सुनील बज्राचार्यले काम गरेका छन्।
यो ब्यान्ड पहिले कभर गीत गाएर युट्युबबाट सार्वजनिक भएको हो। उनीहरूले तीन वर्षअघि पहिलो 'ओरिजिनल' गीत गाएका थिए– त्यसैले चाँडै आऊ।
त्यसपछि अर्को गीत 'मदहोश' गाए। केही समय फेरि कभर गीतमै अल्झिए। यसबीच ठमेल, कीर्तिपुर लगायत ठाउँमा 'लाइभ' पनि गाए।
लामो अन्तरालपछि अहिले उनीहरू धमाधम आफ्नै गीत सार्वजनिक गरिरहेका छन्। लकडाउनको समय ब्यान्डलाई फलदायी भएको उजन बताउँछन्। यही समय उनीहरूले 'मैचा' रचना गरेका हुन्।
यसबाहेक अन्य ६ नेपाली गीत (सम्झी तिमीलाई, मेरो यो गीत, आत्तिएको मन, यो हावा, चाहन्छु, माया गर्छु) र अर्को नेवाः गीत 'थौ कने' सार्वजनिक भएका छन्।
'थौ कने' ब्यान्डको दोस्रो नेपाल भाषाको चर्चित गीत हो, जसको भ्यूज साढे एक लाख कटेको छ।
'नेपाल भाषामा गीत बनाउने इच्छा थियो, लकडाउनले समय दियो,' गीतबारे बताउँदै उजनले भने, 'नेपाली गीत लेख्नभन्दा अलि गाह्रो हुने रहेछ। नेपाली धेरै बोलिने भएर होला दिमागमा धेरै नेपाली शब्द नै खेलिरहेका हुन्छन्। घरमा नेवार भाषामा कुरा गरे पनि गीत लेख्दा बेग्लै हुने रहेछ।'
पछिल्लो समय थप नेपाल भाषाका गीतमा काम गरिरहेको उनले बताए, 'पहिला म गीत कम्पोज गर्छु अनि शब्द लेख्छु। त्यसपछि ब्यान्डसँग बसेर कस्तो खालको संगीत भर्ने सल्लाह हुन्छ। त्यहीअनुसार हामी ज्याम गर्छौं। त्यसपछि म कम्प्युटरमा बसेर काम गर्छु। कम्प्युटरमा बसेर एक्लै काम गर्न मन लाग्छ।'
उजनले पढेको विषय पनि कम्प्युटर नै हो। अहिले 'इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट' मा स्नातक गरिरहेका छन्। उनलाई लाग्छ, ब्यान्डले अहिलेसम्म खासै संघर्ष गर्नुपरेको छैन, 'गीत हिट भएपछि भने राम्रो बनाउने चुनौती थपिएजस्तो हुने रहेछ। अब बल्ल संघर्षको चरण सुरू भएको महशुस भएको छ।'
करिब एक दर्जन 'ओरिजिनल' गीत सार्वजनिक गरेको इमर्जका गीत मायाप्रेममा बढी केन्द्रित छन्। आफूलाई भने 'कन्ट्री रक' र 'इगल्स' ब्यान्डका गीत मन पर्ने उनी बताउँछन्।
भन्छन्, 'अरू किसिमका गीत पनि लेख्न मन छ। अहिले भने यसैमा रमाइलो लागिरहेको छ। दर्शक-श्रोताले पनि मन पराउनुभएकाले अहिले यस्तै गीत बढी ल्याउने छौं।'
यो ब्यान्डको पछिल्लो हिट गीत 'मैचा' को नेपाली भाव यस्तो हुन्छ:
फूल हेरेर तिमी नै याद आयो
मन मेरो शितल भएर आयो
त्यसैले तिमी नजाऊ
छाडेर मलाई यहाँ
हावा आए पनि पानी परे पनि
तिमी नै मेरो मुटुभित्र
(कता जान लागेको)२
कता जान लागेको रे...मैचा
अहिले नजाऊ न, हतारिनुपर्छ र?
कता जान लागेको रे...
बादल बीचमा, तिमीलाई नै खोजिरहेँ
देखे चन्द्रझैं उज्यालो तिम्रो मन
त्यसैले मेरो नजिक बस
मलाई तिमी भनिराख
हुरी आए पनि पानी परे पनि
तिमी मात्रै मेरो मनभित्र
पख पख! एकछिन त सँगै बस
भखरै त भेटेको जस्तो लाग्छ
कति धेरै कुरा तिमीलाई भन्न बाँकी छ
नजिक नजिक अलि आइदेऊ न तिमी
मायाको कुरा थोरै भनिदेऊ न
तिम्रो काखलाई सिरानी बनाउनुछ
त्यसैले तिमी नजाऊ छाडेर यहाँ मलाई
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन १, २०७७, १५:१३:००